यो Munchers स्लॉट 2013 को अप्रिलमा रिलीज गरिएको थियो। खेलको विकासकर्ता र प्रदायक अर्को अग्रेषण गेमिङ हो - 120 क्यासिनोहरूमा प्रयोग गरिएको एक ब्रान्ड। अर्को उत्पादन गेमले भिडियो स्लटहरूमा विशेष ध्यान दिन्छ, सबै किसिमको अभिनव सुविधाहरू सिर्जना गरेको छ जसले कम्पनीको घरको नाम बनाएको छ। Munchers स्लॉट को RTP 95.35% हो, यो एक अद्वितीय विषय को विशेषता हो, र अनलाइन प्लेयर को बीच 3.6 को बाहिर5को लोकप्रियता प्राप्त गर्दछ।
अन्य स्लॉटहरूको विपरीत जुन आरामदायक वातावरणको वादा गर्छ समुद्र तट वा अन्य प्यारा ब्रेकवाटहरू, Munchers स्लटले यो के बारे सबै कुरा लुकेको छैन। अर्को शब्दमा, केही कामको लागि तयार हुनुहोस्! ग्रीनहाउसका बासिन्दाहरू मन्चेस्टरहरू हुन्, साथै मक्का, मकवान, पोकर आइकनहरू Ace देखि Nine बाट, र अन्वेषक - डिब्बे, दस्ताने र मोतीहरू पानी।
रेल्स हरी बिरुवाहरु को एक सुंदर पृष्ठभूमि को बिरुद्ध स्थित छ। जब पनि विजयी हुन्छ तब एनिमेशनहरू हुन्छन्। अर्को जेनेशन गेमिङले यस खेललाई प्रभावकारी ध्वनि प्रभाव र एक साटो मनोरञ्जन संगीतको साथ पनि जोडियो।
Munchers स्लॉट प्ले गर्नका लागि सुझाव
यो5समायोजन योग्य वेनलाइनहरूको साथ3× 25 स्लॉट मिसिन हो। प्रति रेखा से भिन्न हुन्छ 001 क्रेडिटको अधिकतम 10.00 क्रेडिट। त्यसकारण, जब सबै 25 रेखाहरू सक्रिय हुन्छन्, प्रति स्पिन लागतले 0.25 क्रेडिटबाट 250 क्रेडिटहरूमा दायरा हुन सक्छ।
Muncher जंगली प्रतिमा सबै बगैचा पागलपनको आरोपमा छ। यसको अधिकतम संयोजनमा 5,000 सिक्काहरूको लायक यो उच्चतम सशुल्क प्रतीक हो। तपाईंको बैंक्रोलमा प्रभावकारी रूपमा थप अर्को प्रतिमा स्क्याटर वाटर गर्न सक्नुहुन्छ, जसले अधिकतम संयोजनका लागि x100 लाई शर्त दिन्छ।
प्रत्येक बागवानीले यो कसरी टाढा जान्छ कि यो एक उडानलाई समात्न सक्छ, तर तपाईले 1,500 सिक्का भुक्तानी गर्नुहुनेछ। अर्कोतर्फ, सबै कीराहरू नियन्त्रणमा राख्नु हुँदैन। ग्रीनहाउस एउटा ठाँउ हो जहाँ त्यहाँ धेरै कोब्सब जित्नुपर्दछ, यसका बारेमा पाँच मकले तपाईलाई 750 सिक्का तिर्नेछ। अन्तमा, एक राम्रो Muncher tamer ले सधैं आफ्नो सूचीमा राख्छ, किनकी पाँच को एक प्रकार को दस्ताने वा मोती एक्सएनएमक्स सिक्का बाहिर भुक्तानी हुनेछ।
सबै भन्दा कम सशुल्क प्रतीकहरू पारंपरिक पोकर आइकनहरू हुन्, जुन उनीहरूको अधिकतम संयोजनका लागि 100 र 200 सिक्किन्स बीच कमाइनेछ।
Muncher स्लॉट अद्वितीय विशेषताहरु
जब फूल राम्ररी पानी पिउने गरिन्छ, उनीहरूले सुगन्धित खुशबू, रंगीन सुन्दरता र नि: शुल्क स्पिनहरू साझेदारी गर्छन्। हो, तीन बिखरे पानीको पानीले दस मुक्त स्पिनहरू ट्रिगर गर्नेछ! यस सुविधाको समयमा, मन्चर्सले कहिलेकाँहि विस्तारित जंगली वनमा सम्पूर्ण रील चकित गर्न सक्नेछ, जुन किनकि नि: शुल्क स्पिनहरू तपाईंको जीतमा नाटकीय रूपमा वृद्धि गर्न उत्तम समय र ठाउँ हो।
तपाईंको बैंक्रोलाई दोहोरो वा चौडाई गर्न अर्को तरिका जुआ द्वारा छ। नियमहरू मानक हुन् - या त रंग वा सट्टा सही अनुमान लगाईनु पर्छ। जुआ फिचर खेलको समयमा पाँच पटक भन्दा बढी प्रयोग गर्न सकिँदैन।
Munchers स्लॉट प्ले गर्नको लागि उत्तम क्यासिनो
यस खेलको प्रस्तावमा शीर्ष ब्रान्डहरूमा गेट्स क्यासिनो, क्यासिनो क्रूज, वेरा र ज्यान क्यासिनो, भिडियोस्लट्स क्यासिनो, व्हाइटबर्ट कैसीनो र धेरै अन्य छन्।
KeyToCasino यसको ब्रान्ड, अनलाइन प्रतिष्ठा, पुरस्कारहरू, बोनसहरू, सफ्टवेयर प्रदायकहरू र मोबाइल यन्त्रहरूसँग अनुकूलता सहित प्रत्येक ब्रान्ड बारे विस्तृत जानकारी प्रदान गर्दछ। यदि माथि लिङ्क गरिएको कुनै पनि लिङ्कहरूले तपाइँका मागहरू सङ्कलन गरेन भने, केवल फिल्टरको बायाँ कुनामा फिल्टरहरू प्रयोग गर्नुहोस् तपाईंको उत्तम क्यासिनो छनौट गर्न।
Munchers स्लॉट समीक्षा: KeyToCasino निष्कर्ष
Munchers स्लॉटमा मूल विषय र एक आकर्षक सुविधा छ। जब बेस गेमले ठूलो जीत कमाउन धेरै विकल्पहरू प्रदान गर्दैन, विस्तारित वन्य प्रतीकहरू सम्पूर्ण रिेल लुकाउँछ वा नि: शुल्क स्पिनहरूको दौडान पनि दुईवटा उडान गर्दै तपाईंको बैंकमा गम्भीर वृद्धि हुन सक्छ। यसबाहेक, जीतहरू छिट्टै भुक्तानीको लागि जुआ पनि गर्न सकिन्छ।
अर्को महानको लागि NextGen स्लॉट, स्पिन सर्जिकर प्रयास गर्नुहोस्। पृथक स्क्यान्याण्ड्वेनियाली दृष्यहरू बीचको कथा हुन्छ, जहाँ आइस रानी जीवन बिताउँछ। भाग्यको साथ, उनीले तपाईंलाई 10 निःशुल्क स्पिनहरूको साथमा इनाम प्रदान गर्न सक्दछन्, जो जंगली रिसेल्सको विशेषता हो।
आईजीटीद्वारा बगैचा पार्टी ती खेलाडीहरूको लागि अर्को स्लॉट हो जुन उनीहरूले बजाउँदा शांत हरियो दृश्यहरू मन पराउँछन्। खेलको मुख्य क्यारेक्टर - प्यारा बगैचा बौद्ध - तपाईले5को 20x गुणकसँग 30x गुणकसँग3गुणकसँग स्पिङ्ग गर्न सक्नुहुनेछ जुन IGT को अद्वितीय MultiWay Xtra सुविधा वा विभिन्न विकल्पहरूसँग निःशुल्क स्पिन प्रदान गर्दछ।
???? यूरो 860 फ्री कैसीनो टूर्नामेंट
???? 100 फ्री spins
💵 155% बोनस
💵 785% जम्मा जमा बोनस
💵 460% स्वागत बोनस
💵 215 फ्री स्पिन कुनै जम्मा कैसीनो छैन
💵 380% जम्मा मिलान बोनस
💵 यूरो 333 कैसीनो टूर्नामेंट
💵 EUR 99 मोबाइल फ्रीरोल स्लट टूर्नामेंट
💵 EUR 650 कुनै जम्मा बोनस कैसीनो छैन
💵 € 3275 जम्मा बोनस
💵 पाउन्ड 475 नि: शुल्क चिप क्यासिनो
💵 $ 1470 NO DEPOSIT CASINO बोनस
💵 $ 3095 जम्मा रकम छैन
💵 $ 955 फ्री कैसीनो टूर्नामेंट
💵 255 नि: शुल्क स्पिन कुनै जम्मा कैसीनो छैन
💵 $ 480 निःशुल्क चिप
💵 810% जम्मा जमा बोनस
💵 € 805 फ्री कैसीनो टूर्नामेंट
💵 पाउन्ड 310 डेली फ्रीरल स्लट टूर्नामेंट
💵 € 380 अनलाइन कैसीनो टूर्नामेंट
💵 € 2375 जम्मा जमा बोनस
💵 यूरो 380 मुक्त चिप कैसीनो
💵 यूरो 1350 कुनै जम्मा बोनस छैन
💵 € 444 फ्री कैसीनो टूर्नामेंट
💵 € 1380 जम्मा बोनस
💵 265% बोनस
💵 पाउन्ड 975 टूर्नामेंट
💵 315% साइन अप क्यासिनो बोनस
💵 90% जम्मा जमा बोनस
💵 EUR 1285 जम्मा बोनस छैन
💵 155 फ्री स्पिन कुनै जम्मा छैन
💵 525% पहिलो जम्मा बोनस
💵 150% बोनसस क्यासिनो
💵 EUR 3005 कुनै जम्मा बोनस कोड छैन
💵 $ 4640 कुनै जम्मा बोनस कैसीनो
💵 $ 1260 जम्मा बोनस कोड छैन
💵 € 215 अनलाइन कैसीनो टूर्नामेंट
💵 60 नि: शुल्क कैसीनो स्पिन
💵 460% म्याच बोनस क्यासिनो
💵 480% साइन अप क्यासिनो बोनस
💵 690% क्यासिनो म्याच बोनस
💵 € 540 अनलाइन कैसीनो टूर्नामेंट
💵 यूरो 570 नि: शुल्क चिप कैसीनो
💵 € 260 डेली फ्रीरोल स्लट टूर्नामेंट
एक मा थप्नुहोस्
ओड वन एक 1x2 गेमिंग द्वारा एक साधारण कार्ड खेल हो। दुई कार्डहरू लगाइएको छ र कुल लिइएको छ, जहाँ ...
Munchers अपडेट गरिएको: जनवरी 22, 2019 लेखक: आमिर Berrey
3.0.0.0.3 बोनस बलिङ
3.0.0.0.4 विश्व भ्रमण
3.0.0.0.5 किंग कैशलोट
3.0.0.0.7 उत्कृष्ट चार
3.0.0.0.8 बुलेसलेस रानी
3.0.0.0.9 एक मा थप्नुहोस्
3.0.0.0.11 जादुई मन्त्र
3.0.0.0.12 गुप्त कोड
3.0.0.0.15 चार चार चार
3.0.0.0.16 सुनको स्ट्राइक
3.0.0.0.17 क्रिस्टल रत्न
3.0.0.0.19 बैंक टाँस्नुहोस्
3.0.0.0.21 हट शट
3.0.0.0.23 जोकर पोकर4प्ले पावर पोकर